April 2020 – Kalfadhi
April 30, 2020 April 30, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa xusay in shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan Baarlamaanka in dalka aan gaarsiinno doorasho xur iyo xalaal ah marka la gaaro sannadka 2021, xiligaasi oo lagu ballansanyahay doorashooyinka dalka Soomaaliya. Mudane Mursal, ayaa sheegay in si taasi loo gaaro in xukuumadda looga fadhiyo in ay Baarlamaanka usoo gudbiso dhammaan shuruucda lagama maarmaanka u ah doorashada, oo ay kamid yihiin sharciga jinsiyadda, wax ka bedelka sharciga axzaabta siyaasadda iyo kuwo kale. Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh, ayaa sheegay…
April 29, 2020 April 29, 2020 Hassan Istiila
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa shaaciyay in ay qoraal u direen Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Kheyre, Guddoomiyeyaasha Labada Aqal iyo Xeer Ilaaliyaha Qaranka, iyagoo qoraalkooda ku muujiyay walaac aad u weyn oo ku saabsan warbixino iyo xogo dhowaan la soo saaray oo lagu sheegay in xiriir iyo iskaashi uu ka dhaxeeya Hey’adda NISA iyo Al-Shabaab. Madasha ayaa illaa shan qodob u soo jeediyay Madaxda ay warqada u direen sida in baaritaan madax bannaan oo deg-deg lagu sameeyo dilkii Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir Allaha u naxariistee Eng. C/raxmaan Yariisow oo weerar ka…
April 29, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Aqalka sare Senator Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan, ayaa sheegay in dhowaanadan ay soo baxeen xadgudub lagu beegsanayo dad gaar ah, oo ka tirsan hay’adaha amniga dalka qaarkood, gaar ahaan Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA, gaar ahaan markii uu qabtay hoggaanka hay’addaasi Fahad Yaasiin. Qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay ayuu Senator Maxamed Amiin ku sheegay in tan iyo markii Hoggaanka NISA uu qabtay Fahad Yaasiin ay xadgudubyadaas bilowdeen. Waxaa uu xusay in markii hore jiritaanka Hey’adda Nabadsugida asal ahaan aan lagu…
Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna ayaa sheegay in khatarta uu dalka ku haayo Cudurka Coronkavirus ay mareyso meel adag, kaddib markii dadka uu soo ridanayo cudurkan ay sare u kaceen. Sheekh Shariif ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaad ee ka imaanaya dhaqaatiirta Caafimaad. “Khatarta cudurka Coronavirus ee dalkeenna waxay maraysaa xaalad adag oo u baahan in aad loo raaco talooyinka dhakhaatiirta caafimaadka ay noo soo gudbinayaan sida, Sanka iyo afka oo la xirto, in…
April 27, 2020 April 27, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in laga wada-shaqeeyo sidii Dastuurka looga saari lahaa ku-meel-gaarnimadda, loogana dhigi lahaa Dastuur dhammeystiran. Mudane Mursal, ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu kasoo gudbay ku-meel-gaarnimadda sidaasi si lamid ahna loo baahanyahay in Dastuurka uu isagana kasoo gudbo ku-meel-gaarnimadda, uuna noqdo mid rasmi ah. “Baarlamaankii 9-aad waxaa uu Dastuurka kusoo wareejiyay Baarlamaanka 10-aad, muddada xil heynta Baarlamaanka 10-aad waxaa ay ku egtahay sannadkaan. Waxaa noo muhiimsan Dastuurka in laga shaqeeyo”. Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee BJFS Mudane…
April 26, 2020 April 26, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibrahim (Yarey), oo ka hadleysay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa sheegtay in guddiga uu waddo shaqaddiisa ku aadan sidii dalka Soomaaliya ay uga dhici laheyd doorasho Qof iyo Cod ah oo xiligeeda ku dhacda. Balse falanqeeyayaasha siyaasadda Soomaaliya, ayaa ku doodaya in aysan macaquul aheyn doorasho Qof iyo Cod ah, haddana dalka uu soo gaaray cudurka COVID-19. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in hadda dooda ay tahay dowladda ma muddo kororsi ayaa ay sameyn doontaa mise doorashada xiligeeda ayey ku dhici doontaa.…
April 25, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaan Ahmed Macalim Fiqi, ayaa dhawaan kasoo muuqday Golaha Wasiiradda ee maamulka Galmudud ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Axmed Qoor-Qoor. Xildhibaanka oo hadda kamid ah Golaha Shacabka, ayaa loo magacaabay wasiirka amniga ee maamulkaasi. Dad badan ayaa siyaabo kala duwan u hadal hayay xildhibaanka in uu kamid noqday golaha. Halkan ka akhriso war-saxaafadeedkii uu soo saaray xildhibaanka. Warsaxaafadeedkan waxaan jeclaystay inaan jawaab uga dhigo fariimo badan oo iga soo gaaray asxaabtayda iyo taageerayaashayda siyaasadda ee maqlay inaan dib ugu laabanayo Galmudug (Deegaankaygii) kuwaasoo qaarkood rumaysan waayey,, qaar kale ay ku…
April 23, 2020 April 26, 2020 Hassan Istiila
Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkan dib-u-dhigay furitaanka Kalfadhigii 7-aad ee Baarlamaanka, kaddib markii cudurka COVID-19 uu kusii baahay dalka. Kalfadhiga ayaa la filayay in uu furmo 20-kii bishan. Qaar kamid ah xisbiyadda siyaasadda ee dalka ayaa dib-u-dhigista kalfadhiga ku micneeyay bilowga muddo kororsi, iyadoo dhawaanadan xisbiyadda ay hadal hayeen in dowladda ay dooneyso in muddo kororsi ay sameeyso, iyada oo ku andocooneysa cudurka COVID-19. Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh, ayaa sheegay in isaga iyo guddoonka Baarlamaanka aysan maalin ku fakarin muddo kororsi, isagoona xusay in…
April 22, 2020 April 22, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, oo kamid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaammay go’aankii xildhibaannadda Baarlamaanka maamulka Koonfur-Galbeed mid taariikhi ah, kaddib markii xildhibaannadda ay muddo sannad ah u kordhiyeen madaxweynaha, si hal xili ay u dhacdo doorashooyinka Madaxweyynaha iyo tan Baarlamaanka. Koonfur-Galbeed waxaa uu ahaa maamulka keliya ee Madaxweynahooda iyo Baarlamaankooda aan isku wakhti la dooranin, iyadoona arrintaasi ay ku timid, habkii aas-aaska maamulkaasi loo maray. Madaxweynaha maamulka waxaa soo doortay ergooyin, iyadoo aanu jirin Baarlamaan. “Go’aanka xildhibaannadda waxaa uu ahaa mid taariikhi ah, taasoo ay isla…
April 21, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaannadda Baarlamaanka dowlad-gobolleedka Koonfur-Galbeed, oo shalay yeeshan kulan ajandihiisu uu ahaa mooshin muddo xileedka madaxwweynaha loogu kordhinayo muddo hal sanno ah. Xildhibaanno gaaraya 30 mudane ayaa horray usoo jeediyay mooshinka, kaas oo ugu dambeyn la keenay kulankii Baarlamaanka ee uu shir-guddoominayay Guddoomiyaha Baaralamanka Dowlad Goboleedka KGS Dr. Ali Siciid Fiqi iyo labadiisa ku-xigeen. Kulanka oo ay soo xaadirtay 87 mudane, ayaa intaasi kaddib la guda-galley ka doodida mooshinka, iyadoona mooshinka ay ansixiyeen 87 mudane, mana jirin xildhibaan ka aamusay ama diiday, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamanka Dowlad Goboleedka KGS…